(L) အမေရိက၏ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများ (ASAM) သည်စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်သစ် (၂၀၁၁) ကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပြီး - သင့် ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်နေသည်
မှတ်ချက်များ။ ဤသည်သည်အမေရိကန်ဆေးစွဲဆေး၏စွဲချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်ထုတ်ဝေသောအကောင်းဆုံးဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ဤဆောင်ပါး, စွဲလမ်းမှု၏တစ်ဦးက Radical နယူးကြည့်ရန်သိပ္ပံမုန်တိုင်းမွှေ The Fix ဟူသောဝဘ်ဆိုက်မှဆင်းသက်လာသည်။ အောက်ဖော်ပြပါရဲရင့်သောအပိုင်းများမှာ YBOP တွင်ဖော်ပြထားသောအယူအဆများနှင့်ဆက်စပ်သည်။
သင့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များဆမ်း: Docs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲ (2011) ကြမယ်, စွဲလမ်းဆေးပညာအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း DSM သဘောမတူရန်သဘောတူ
သင်က Porn အပေါ်ချိတ်ဆက်ပါသလား? ASAM (2011) မေးပါ porn အသုံးပြုသူများသည်ကချိတ်ဆက်ခံရဖို့နဲ့တူရဲ့အဘယ်အရာကိုဖော်ပြရန်
စွဲ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုက fixed မညျနညျး Jed Bickman 08 / 16 / 11 နှင့်အတူဂျနီဖာ Matesa အားဖြင့်
အမေရိက၏ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများသည်စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပါယ်အသစ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးလေးသောပြ —နာ ကြီးများဖြစ်သောအငြင်းပွားဖွယ်ရာများဖြစ်ကြသော ဦး နှောက်ရောဂါနှင့်မကောင်းသောအပြုအမူများ၊ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ လိင်စွဲလမ်းမှုများ၊
သငျသညျစွဲအားလုံးအရက်များ, မူးယစ်ဆေးဝါး, လိင်, လောင်းကစား, အစားအစာနှင့်အခြားတွန်းလှန်ကျင့်ဆိုးအကြောင်းစဉ်းစားနေလျှင်, တဖန်ထင်ပါတယ်။ သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့စွဲလမ်းအပြုအမူအတွက်လုပ်ကြဖို့ဖြစ်စေမယ့်ရွေးချယ်မှုရှိကြောင်းယုံကြည်လျှင်, ကိုကျော်ရ။ စွဲလမ်းဆေးပညာ (ASAM) ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအများအပြားဟာဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ, ဒါခေါ်ဆုလာဘ် circuitry အများစုအထူးသတဲ့ကြီးကျယ်မညီမမျှပတျသကျတဲ့နာတာရှည်အာရုံကြောရောဂါအဖြစ်စွဲ defining အသစ်တစ်ခုစာရွက်စာတမ်း၎င်း၏အရာရှိတဦးကဖြန့်ချိနှင့်အတူထိုအနက်ရှိုင်းစွာကျင်းပအယူအဆတွေအပေါ်ပီပီမှုတ်။ အပျော်အပါး၏အတွေ့အကြုံ၌ဤအခြေခံချို့ယွင်းစာသားမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်နှင့်လိင်, အစားအစာနှင့်လောင်းကစားနဲ့တူ obsessive အပြုအမူတွေနဲ့တူတ္ထုများကထုတ်လုပ်ဓာတုစံချိန်တင်မြင့်တက်လိုက်ရန်အစှဲလမျးသူနှိုးဆော်ခြင်း။
အဓိပ္ပါယ်, စွဲလမ်းနှင့်အာရုံကြောအတွက် 80 ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်သူများထက်ပိုပတျသကျတဲ့လေးနှစ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်, စိတ်စွဲလမ်းမှုသည်အဓိကကျသောနာမကျန်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြissuesနာများသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကြောင့်မဟုတ်ဘဲစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများသည်“ မိမိကိုယ်ကိုဆေးကုသခြင်း” ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟူသောလူသိများသောအယူအဆကိုငြိမ်သက်စေသည်။ စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏နာကျင်မှု။
အမှန်မှာထိုအသစ်သောအာရုံကြောအာရုံစိုက်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်, မြေတပြင်လုံးတွင်သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာစွဲအကြောင်းကိုဘုံအယူအဆဟာ host debunks ။ စွဲ, ကြေညာချက်မိန့်တော်မူ၏, (က) ပျက်စီးဆုံးဖြတ်ချက်ချ (ထိခိုက်သင်ယူမှု, အမြင်နှင့်တရားစီရင်ခြင်းကို) ကနှင့် (ခ) ဇွဲအန္တရာယ်နှင့် / သို့မဟုတ် relapse ၏ထပ်မဖြစ်အောင်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမှာ "ဇီဝစိတ်ပညာလူမှုဝိညာဏ" နာမကျန်း ဖြစ်. , အဆိုပါတည်ပြီးသတ်တယ်သက်ရောက်မှု (က) စွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုရှိသည်နှင့် (ခ) စုစုပေါင်း abstinence အချို့စွဲအဘို့, ထိရောက်သောကုသမှုတစ်ခုလက်တွေ့ရည်မှန်းချက်ကြောင်းဖြစ်ကြသည်။
မကောင်းသောအပြုအမူများကိုယ်တိုင်သည်ရောဂါ၏လက္ခဏာမဟုတ်ဘဲစွဲလမ်းမှုလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ “ စွဲလမ်းမှုသည်မူးယစ်နေသည့်အခြေအနေနှင့်မတူပါ” ဟု ASAM မှထောက်ပြခဲ့သည်။ အလိုတော်သို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ကွက်ကြောင်းသက်သေပြရန်မဟုတ်ဘဲအပြုအမူများသည်စွဲလမ်းသူအားရောဂါနှင့် တွဲဖက်၍ ဖြစ်ပေါ်သောယေဘူယျ“ အလုပ်မဖြစ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ” ကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်းသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သတိရှိသောရွေးချယ်မှုသည်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုအခြေအနေတွင်အနည်းငယ်သာရှိသည်သို့မဟုတ်လုံးဝမပါ ၀ င်ပါ။ ရလဒ်အနေနှင့်လူတစ် ဦး သည်စွဲလမ်းခြင်းကိုရှောင်ရန်မရွေးချယ်နိုင်ပါ။ စွဲလမ်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်အရာဝတ္ထုကိုအသုံးမပြုရန်သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုပျက်စီးစေသည့်ဆုလိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုအားဖြည့်စေသောအပြုအမူများတွင်မပါ ၀ င်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဲဒါကိုတစ်ခုနာမကျန်းကြေညာ, စွဲလမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမှကြွလာသောအခါရသေး ASAM မျှလာကြတယ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ "တည်းကကုသမှုမရှိဘူး left သို့မဟုတ်မလုံလောက်ကုသအထူးသဖြင့်အခါ, မသန်စွမ်းသို့မဟုတ်အချိန်မတန်မီသေစေနိုင်တယ်။ "
အသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားလုံးစှဲ-ရှိမရှိအရက်, ဘိန်းဖြူသို့မဟုတ်လိင်ရန်, အခြေခံကျကျအတူတူ-ဖြစ်ကြောင်းဆိုသခြောထွက်ခွာမည်။ ဒေါက်တာ Raju Haleja, စွဲလမ်းဆေးပညာနှင့်အသစ်သောအဓိပ်ပါယျထွင်းထုသော ASAM ကော်မတီဥက္ကဌများအတွက်ကနေဒါ Society ရဲ့သမ္မတဟောင်းသီးခြားအဖြစ်သူတို့ကိုမြင်သောသူတို့အားဆန့်ကျင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သည်တဦးတည်းရောဂါအဖြစ်စွဲမှာရှာကြသည် "အဆိုပါ Fix ကိုပြောသည် ရောဂါများ။
စွဲလမ်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။ လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်သင်ဟာစွဲလမ်းမှုအားလုံးကိုအားနည်းသွားလိမ့်မယ်။ ” လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်လိင်၊ လောင်းကစား၊ အစားအစာစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါလက္ခဏာကိုတံဆိပ်ခတ်ထားပြီးအရက်သေစာသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူသို့မဟုတ်ကြည်လင်သောမက်ကိုစွဲစွဲလမ်းမှုအရဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရခိုင်လုံသောအနေဖြင့်၎င်း၏သိမ်မွေ့သော်လည်းတူညီသောကျယ်ပြန့်စွာရရှိသောအခိုင်အမာပြောဆိုမှုများထက် ပို၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
အသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (ယား) အဖြစ်လာမယ့်သူ့ရဲ့ Diagnostic အတွက်စွဲလမ်း၏၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ၏အလွန်အမင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့, ဆယ်စုနှစ်-in-the-အောင်တည်းဖြတ်မူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders-ထိုစိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ခံကမျြးစာ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အဆိုပါယားရဲ့ DSM အာမခံကုမ္ပဏီများသည်သူတို့အဘို့အပေးဆောင်တံ့သောကုသမှုဆုံးဖြတ်ဖို့ DSM အဖြေရှာတဲ့အမျိုးအစားနှင့်စံသုံးစွဲဖို့ပညတ်တရားအားဖြင့်ပြဌာန်းထားပါသည်အကြီးအကျယ်ကြောင့်၎င်း, စွဲကုသမှုကိုလမ်းပြသောအပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒများအပေါ်ပိုကြီးတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
ဒေါက်တာ Haleja အဆိုပါ ASAM ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဆိုပါ DSM ကော်မတီကနဲ့သဘောထားကွဲလွဲထဲကသညျထသော Fix ကိုပြောသည်; အဆိုပါ DSM ရောဂါအဖြစ်စွဲသတ်မှတ်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေ (ထို့ကြောင့်ရောဂါရှာဖွေစံ) တုန်းပဲအများအားဖြင့် discrete အပြုအမူတွေအဖြစ်ရှုမြင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ DSM အစား ASAM အဆိုတင်သွင်းကြောင်းရောဂါ၏အနည်းကိန်းများနှင့်စုစည်းအယူအဆ၏, သီးခြားရောဂါအဖြစ်စွဲလမ်း၏အသီးအသီးအမျိုးအစားသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ Haleja က“ ကုသမှုအရလူတွေဟာရောဂါတစ်ခုရဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံမစိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်၊ အလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်းမဟုတ်ဘဲစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများသည်စွဲလမ်းသူအားရောဂါနှင့် တွဲဖက်၍ ဖြစ်ပေါ်သောယေဘူယျ“ အလုပ်မဖြစ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ” ကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်းသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သတိရှိသောရွေးချယ်မှုသည်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုတွင်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမပါ ၀ င်ပါ။ ရလဒ်အနေနှင့်လူတစ် ဦး သည်စွဲလမ်းခြင်းကိုရှောင်ရန်မရွေးချယ်နိုင်ပါ။
စွဲစွဲဖြစ်ဖို့မရှေးခယျြမပေးနိုငျသျောလညျး, သူတို့ကုသမှုရဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Recovery ကို, ASAM ပြောပါတယ်, အကောင်းဆုံးဒါပေမယ့်လည်းလေ့ကျင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သော 12-Step ပညာသင်ဆုများအဖြစ် Self-စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အပြန်အလှန်ထောက်ခံမှုအုပ်စုများကမရင့်သဘောပေါက်သည်။
တချို့ကစွဲ-ဆေးပညာအထူးကု 1939 အတွက်အရက်အမည်မသိ၏ထုတ်ဝေကတည်းကရှိပါတယ်အရာကိုတစ်ဦးက validation အဖြစ်သိမ်းကျုံးသစ်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကြည့်မြင်စွဲ၏ "ရောဂါအယူအဆ" အဖြစ်လူသိများလိမ့်ထံသို့လာကြ၏။ "တစ်ဦးကငျြ့ဝတျပြဿနာ-'Why အဖြစ်အကြီးစားမြင်စွဲမှာလူဦးရေအတွက်လူအတော်များများသူတို့ကပဲရပ်တန့်ကြသည်မဟုတ်လော ''" ဟုဒေါက်တာ Neil Capretto, Pittsburgh အတွက် Gateway မှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာဆေးဘက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်တက်ကြွ ASAM အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကပြောပါတယ်။ "နှစ်ပေါင်းစွဲဆေးပညာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အတွေ့အကြုံရှိလူတို့အဘို့, ငါတို့ကဦးနှောက်ရောဂါရဲ့ငါတို့သိကြ၏။ "
ဤကြေညာချက်သည်ကုသမှုစင်တာများ၊ အစီအစဉ်များနှင့်ဆရာ ၀ န်များစွာတို့၏အဓိကကျသည့်အဆင့် ၁၂ ဆင့်ကိုခေတ်နောက်ကျသွားစေရန်တွန်းအားပေးသလား။ အမှန်မှာပြaနာကို“ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ” ပြtoနာဟုကြေငြာသောအခါ၎င်းသည်အဖြေသည်“ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ” ဖြစ်သင့်သည်ဟုမဆိုလိုပေ၊ နယူးယောက်တက္ကသိုလ်စိတ်ရောဂါကုသရေးပါမောက္ခဒေါက်တာမာ့ခ်ဂယ်လ်လန်တာကအရက်နှင့်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဌာနခွဲ၏ဒါရိုက်တာအပြင်စွဲလမ်းစိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ ၀ င်သင်တန်းအစီအစဉ်ဒါရိုက်တာကပြောကြားသည်။ “ စွဲလမ်းမှုသည်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါက၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ” Capretto ကဤသို့ဆိုသည် -“ ဒီအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ၀ ိညာဉ်ရေးရာချဉ်းကပ်မှုကအရေးမကြီးဘူး။ ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာကျယ်ပြန့်သောစွဲလမ်းမှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နားမလည်သောလူအချို့က၎င်းသည် ဦး နှောက်ဆဲလ်ရောဂါတစ်ခုအဖြစ်သာမြင်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကွန်ပျူတာတွေကိုမကုသကြပါ။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရလူသားတွေရဲ့စုပေါင်းနေထိုင်မှုမှာ `ဇီ ၀ စိတ် - လူမှု - ၀ ိညာဉ်ရေးရာ 'သတ္တ ၀ ါတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမည်သူသည်ထိုဒေသများ၌အကူအညီလိုနေ ဦး မည်နည်းဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်း၏အဘယ်သူမျှမကျောက်-အခှငျ့အရေးကြေညာချက် (ကအောက်ခြေအပါအဝင် Single-လှပတဲ့ရှစ်စာမျက်နှာများမှပြေး) နှင့်အတူ, ASAM ချ-အများစု-on ကိုရောက်လာပြီရှည်လျားစွဲရှိလူများစိတ်ဝင်စား befuddled သောကြက်သား-and ကြက်ဥဆိုတဲ့မေးခွန်းကို၏တစ်ဖက်, ဆေးသမားများနှင့်ရောနှောစွဲပြန်လည်ထူထောင်: အအာရုံကြောရောဂါသို့မဟုတ် compulsive အပြုအမူတွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု, ပထမဦးဆုံးလာသော? အဓိပ္ပါယ်ကဦးနှောက်၏ဒေသများ, မှတ်ဉာဏ်ကို process ကြောင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အကြားရှိအာရုံကြောစနစ်၏အကြိုးကိုဝါယာကြိုး-ဆက်သွယ်ရေးအတွက် abnormalities ကြောင်းပြည်နယ်, စိတျပိုငျးဆိုငျရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ပျော်မွေ့-လာပထမဦးဆုံးနှင့်တဆင့်အကျိုးကို-system ကိုမညီမမျှများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန် Doom လိုက်စားသို့စှဲလမျးသူမောင်း အဆိုပါစွဲလမ်းအပြုအမူ။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်, စာရွက်စာတမ်းသည်ဤအပြုအမူသူတို့ကိုယ်သူတို့အကျိုးကို circuitry ကိုပျက်စီးစေခြင်းနှင့်ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်စွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောမှတ်ချက်ပြုထားသည်။
အဆိုပါကြေညာချက်သည်၎င်း၏ကွမျးဖငျြးထဲမှာညီ, လူ့ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းသဘာဝဆုလာဘ်စနစ်ကပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကပေးအပ်ဓာတုနိုင်ငွေပမာဏအားဖြင့်ကျော်ဖြတ်သို့မဟုတ် highjacked ဖြစ်ကြောင်းဖြတ်တောက်-အစွန်းစွဲသိပ္ပံအတွက်ရေပန်းစားရဝုဏ်အတူ။ "အရေးကြီးလှသည်သောဆုလာဘ် circuitry bookmarks ကိုအမှုအရာ: အစာစားကလေးများပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, လိင်ဆက်ဆံ, ရင်းနှီးသောမိတ်တည်တံ့ခိုင်မြဲ" ဟုဒေါက်တာမာ့ခ် Publicker, Portland-မိန်း၏အကြီးဆုံး rehab-နှင့်စွဲဆေးပညာဟောင်းဒေသတွင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထဲမှာကရုဏာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာဆေးဘက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ် Kaiser Permanente အလယ်အလတ်အတ္တလန္တိတ်ဒေသကြီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးစွဲသည့်အခါ“ မြင့်မားသော” ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဆုလာဘ်သည်သဘာဝတိုက်နယ်မှရရှိသောဆုလာဘ်များထက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုများသည်။ အာရုံကြောဆိုင်ရာစနစ်သည်အာရုံခံဆဲလ်များပို့လွှတ်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာ OxyContin နဲ့မျိုးစိတ်မတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သို့မဟုတ်ကိုကင်းကိုအက်ကွဲခြင်းမရှိသောကြောင့်၊ ဒါကြောင့်သာမန်ပျော်ရွှင်မှုခံစားမှုကိုရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး” ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ “ ဒီပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခြင်းကရှင်သန်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့်အရာကနေအကုန်အကျခံပါတယ်။ ၎င်းကိုသင်ရှုမြင်ပါက၎င်းသည်ဖျားနာခြင်းနှင့်အချိန်မတန်မီသေဆုံးခြင်းတို့ကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ” တက်ကြွသောစွဲလမ်းသူသည်ဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းဖြင့်စောစီးစွာသေဆုံးနိုင်သည်။
အဆိုပါကြေငြာချက်တွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်သည်ရင့်ကျက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်လူရွယ်များ၏တီထွင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်ခါတလဲလဲသတိပေးမှုများပေါ်ပေါက်စေသည်။ လေးနက်စွဲအပြုအမူတွေ။ ခိုင်မြဲစွာစွဲများ၏အာရုံကြောရောဂါမော်ဒယ်အတွက် grounded နေစဉ်, အဘယ်သူမျှမနေဖြင့်အဓိပ္ပါယ် (ကသင့်ရဲ့ DNA ကိုအမွေခံရသောမြေဖို့အကြောင်းမရှိ၏ထက်ဝက်ခန့် attributes) အထူးလျှော့စျေးမျိုးဗီဇကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေရှိမရှိထိခိုက်စေခြင်းနှင့်ဘယ်လောက်မျိုးရိုးဗီဇချိန်ခွင်ရေသွန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုသတိထားပါတယ်။ အဆိုပါကြေညာချက်တွင်မိဘအုပ်ထိန်းခြင်းနှင့်ဘဝအတှေ့အကွုံမှတဆင့်ဝယ်ယူ "ခံနိုင်ရည်" စွဲလမ်း၏မျိုးဗီဇစကားရပ်တားစီးနိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ "မျိုးရိုးဗီဇသဘောထားကိုမဟုတ်ဘဲကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်" ဟု Capretto ကပြောပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များဖြစ်သောစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ဖိစီးမှုအလွန်များခြင်း၊ ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ်၊ အတွေးကိုယ်ယိုယွင်းမှုနှင့်အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်း၊ - အခြားသူများကအဆင့်မြင့်အုပ်စုများ (သို့) အခြားသူများကပိုမိုမြင့်မားသောသတိရှိခြင်း) များကိုလည်းလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုကြသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ASAM နောက်ထပ်ဆုလာဘ်စနစ်များကိုနားလည်သဘောပေါက်စွဲရဲ့ neurobiology နားလည်သဘောပေါက်ရုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကပြောပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များနေဆဲအချို့စွဲအချို့မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အပြုအမူနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူအခြားအစွဲနှင့်အတူအာရုံမစိုဖြစ်လာဘယ်လိုနားဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်, ဘယ်လိုအချို့စွဲဖြစ်လာအခြားသူများကိုမထိခိုက်ပါဘူးအချို့ဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်သုံးစွဲဖို့အစပျိုး; နှင့်မည်သို့မတရားသောပြည့်စုံနာလန်ထူပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာဆက်လက်ရှိနိုငျပါသညျ။
အဆိုပါကြေညာချက်အမူအကျင့်များမှာအားလုံးသောရောဂါရှာဖွေထူးခြားချက်, ဆန့ ်. ရန်ကြိုးစား: နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းရှောင်ကြဉ်ရန်, ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်; မတရားသော; တဦးတည်းရဲ့ပြဿနာများ၏လျော့ဆုပ်ကိုင်; နှင့်ပြဿနာစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု။
ဒါကြောင့်အဓိပ္ပါယ်ဤရောဂါ၏တစ်ဦး quantifiable အဖြေရှာတဲ့အမှတ်အသားမှညွှန်ပြ၏နိုငျသောပြဿနာလား? "ငါသည်ဤအရပ်၌ကား, သိသာဖျောပွစခွေငျးငှါ," Publicker, ညညျးတှားခွငျး, ကပြောပါတယ် "သင်မူကားတစ်ဦးတက်ကြွအရက်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဦးနှောက်ပုံရိပ်လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ "
တကယ်တော့သူကအလေးအနက်ထားသည်မှာစွဲလမ်းစေသည့်လက္ခဏာများ၏“ အရေအတွက်နှင့်ကြိမ်နှုန်း” - တစ်နေ့လျှင်သင်မည်မျှသောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုသင်အသုံးပြုသောနာရီမည်မျှ - သည်“ အရည်အသွေး [နှင့်] ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလမ်း” ထက်နိမ့်ကျသောအမှတ်အသားမဟုတ်ကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ကြီးထွားလာနေသောဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့်တိုင်အောင်စွဲလမ်းသူသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုတုံ့ပြန်သည်။
အသစ် ASAM ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သီးခြားရောဂါအဖြစ်စွဲလမ်း၏အသီးအသီးအမျိုးအစားသတ်မှတ်ကြလိမ့်မည်သည့် DSM ကော်မတီနှင့်အတူသဘောမတူထဲကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထလေ၏။ "ကုသအသုံးအနှုန်းများမှာ, ကလူတဦးတည်းရောဂါရှုထောင့်, ဒါပေမယ့်တစ်ဖွဲ့လုံးကရောဂါအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်," Haleja ကပြောပါတယ်။
Publicker, 30 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးတက်ကြွ ASAM အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်စွဲလမ်းများအတွက်ဆေးဝါး-ကူညီကုထုံးတစ်ခုထောက်ခံအားပေးခဲ့သူ, စွဲပြန်လည်နာလန်ထူရောဂါမယ့်က၎င်း၏ဇီဝသွင်ပြင်လက္ခဏာ၏, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့်များ၏ကုသမှုအပေါ်မူတည်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ "ဒါဟာဆေးဝါး-ကူညီကုထုံးမဟုတ်ဘဲကုထုံး-ကူညီဆေးဝါးကိုခေါ်မယ့်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "တစ်ဦးတည်းဆေးဝါးပျက်ကွက်။ ကျွန်မတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျော်ကဒီကိုမြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တကယ့် relapse ဖို့ရုန်းကန်နေရလူတစ်ဦးခြားနားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ "
သူကစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဆွဲယူ: "သင်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့ကတစ်ဦး serotonin ချို့တဲ့ရောဂါရဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု SSRI [လက္ခဏာဆေးဝါး] အပေါ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကထားရန်ကြောင်းဖြေကြားပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့စိတ်ကျရောဂါလူအများစုမေးဖို့ပါ။ သို့သော်စိတ်ကျရောဂါကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်မတတ်နိုင်သောလမ်းပါပဲ။ ဆေးဝါးအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးချက် reimbursed မဟုတ်ဘယ်မှာကျနော်တို့ယခုခေတ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ "ဒါဟာ full-ထွင်းဖေါက်ဇီဝနာမကျန်းအဖြစ်စွဲလမ်း၏ ASAM ရဲ့အသစ်အမှတ်တံဆိပ်စွဲကုသမှုများအတွက်ငွေကြေးပြန်လည်ရရှိရန်ကူညီပေးပါမည်ရှိမရှိထင်ရှားစေခြင်းငှါနေဆဲဖြစ်သည်။ အာမခံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, နာမကျန်းသူကသူသို့မဟုတ်သူမရောဂါ-ဖြစ်နိုင်သည်ငွေကြေးပြန်လည်ပေးလျက်ရှိဖြိုဖျက်ရှိပါတယ်လူနာရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူးကြောင်း -stipulating "ဇီဝဗေဒအမြစ်များ" ရှိကြောင်းရှင်းလင်းထားသည့်။
Capretto သဘောတူ: "ဒီချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသောအရာအနာဂတျအတှကျကြောင့်အကူအညီရရန်လိုသောလူတို့အဘို့နည်းပါးလာအတားအဆီးဆိုလိုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခြားရောဂါများအတိုင်းအတာသို့ပိုပြီးစွဲဆောင်ကြဉ်းကူညီပေးပါတယ်။ "
ASAM ၏မတည်မငြိမ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုမှာစွဲလမ်းသူများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ခေါင်းမာသောလူမှုရေးအဂတိလိုက်စားမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ဖြစ်သည်။ “ သူတို့ကစွဲလမ်းမှုကိုအဂတိလိုက်စားမှုကင်းရှင်းအောင်လုပ်ဖို့သူတို့စီစဉ်ထားတာဘာမှမရှိဘူး။ "ဘယ်သူမှတစ် ဦး စွဲဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်း။ ငါရှိသည်မှာလူနာအပေါ်အပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အချိန်တော်တော်ကြာတယ်။ ဖြစ်ပျက်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်သင်၌သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီးသင်၏အတွေးသည်ချို့ယွင်းနေပြီး၎င်းသည်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူနာများသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အပြစ်တင်ခံရဖွယ်ရှိပြီးမိသားစုများက၎င်းတို့အားစိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိသော၊ အားနည်းသူများအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကစွဲလမ်းမှုရောဂါပါ။
ဂျနီဖာ Matesa Guinevere သမ္မာသတိရှိကြလော့လာ, သူမ၏ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာစွဲလမ်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးသားခဲ့သည်။ အဆိုပါလုပ်ခြင်းအတွက်မိခင်များနေ့၏နေ့ရက်များနှင့် Nights: သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ဝန်၏ဆုရဂျာနယ်, ခါး-ကြည့်အပါအဝင်ကျန်းမာရေးကိစ္စများအကြောင်းနှစ်ခုသုတစာပေစာအုပ်ရေးသားသူဖြစ်ပါသည်။
Jed Bickman သည်ဤဆောင်းပါးအတွက်ထပ်ဆင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ သူသည် The Nation, The Huffington Post နှင့် Counterpunch.com အတွက်ရေးသားခဲ့သည်။ APA ၏ DSM နှင့်၎င်း၏နိုင်ငံရေးနှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင်စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပါယ်သစ်ကိုလာမည့်အပတ်တွင် The Fix အတွက်သူ၏ပထမဆုံးအပိုင်းကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။